राष्ट्रकवि घिमिरेको १०३ औँ जन्मजयन्तीमा व्यक्तित्व चर्चा र रचनावाचन - Naya Online
बिहिबार, अशोज ७, २०७८ (September 23rd, 2021 at 7:54pm ) Uncategorized
२०७८ असोज ७ गते, काठमाडौँ ।
हाँसी हिँड्छन् पथिक अरुको दर्द को आज सुन्छ
नेपाली काव्यसाहित्यका राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको आज जन्म दिन । वि.सं. १९७६ असोज ७ गतेका दिन लमजुङ जिल्लाको पुस्तुनमा जन्मिनुभएका राष्ट्रकवि घिमिरेको १०२ वर्षको उमेरमा गत साल भाद्र २ गतेका दिन निधन भएको थियो । स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैलीमा काव्य सृजना गर्नुहुने राष्ट्रकवि घिमिरेको १०३ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा बिहीबार नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा ‘व्यक्तित्व चर्चा र रचनावाचन’ कार्यक्रमको आयोजना गरियो । ‘गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली, जय, जय, जय नेपाल, सुन्दर, शान्त, विशाल’ बोलको गीतसँगै सुरु भएको कार्यक्रमको आरम्भमा कुलपतिद्वारा पानसमा दीप प्रज्वलन गरिएको थियो भने राष्ट्रकवि घिमिरेको तस्बिरमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव, प्राज्ञ परिषद्का सदस्यहरू र राष्ट्रकविका कान्छा छोराले माल्यार्पण गरी श्रद्धासुमन अर्पण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले राष्ट्रकवि घिमिरे लोकको भावना बुझेर काव्य सृजना गर्ने साधक भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “राष्ट्रकवि घिमिरेका लोकजीवन, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई आत्मसात गरी सृजना गरिएका सृजनाहरू कालजयी छन् ।” कुलपति उप्रेतीले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्यसमेत रहनुभएका राष्ट्रकवि घिमिरे प्राज्ञ परिषद् सदस्य हुँदै उपकुलपति, कुलपति र आजीवन सदस्यका रूपमा रहनुभएको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रकवि घिमिरे प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको अभिभावक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “आफ्नो अभिभावकको जीवनको अन्तिम र महत्त्वकाङ्क्षी महाकाव्य ‘ऋतम्भरा’ उहाँका परिवारका सदस्यको अनुमति प्राप्त भएमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान छाप्न तयार छ ।”
उपकुलपति डा. जगमान गुरुङले राष्ट्रकविलाई आफूले सदैव राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति जिम्मेवार स्रष्टाका रूपमा पाएको उल्लेख गर्नुभयो । उपकुलपति डा. गुरुङले राष्ट्रियतासम्बन्धी उहाँका अमर सृजनाहरूकै कारण राष्ट्रले उहाँलाई राष्ट्रकविको उपाधिद्वारा सम्मान गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको सभाध्यक्षसमेत रहनुभएका साहित्य (पद्य÷काव्य) विभाग प्रमुख प्रा.डा. हेमनाथ पौडेलले राष्ट्रकविको पहिलो स्मृतिसभा भएको उल्लेख गर्दै अब वर्षेनी उहाँको जन्मतिथिका अवसरमा यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रकविका सृजनाहरूले नेपालका नागरिकलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति प्रेम गर्ने अमर सृजनाहरू दिनुभएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा साहित्य (लोकवार्ता र बालसाहित्य) विभाग प्रमुख डा. देवी नेपालले राष्ट्रकविका प्रवृत्ति झल्किने विभिन्न प्रतिनिधिमूलक रचनाहरू पाठ गर्नुभएको थियो । यसै गरी कार्यक्रम तथा योजना महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी गौतमले राष्ट्रकविको ‘गौरी’ शोककाव्यभित्रको एक अंश पाठ गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम सञ्चालन प्राज्ञ सभा सदस्य एवम् सञ्चार तथा डायास्पोरा संयोजक शशी लुमुम्बूले गर्नुभएको थियो ।